A Procrastinator si Nduzi Ezumike Marketing | Martech Zone
Oge ezumike bụ ezumike ebe a, ọ na-akpụzi ka ọ bụrụ otu n'ime ndị kachasị na ndekọ. Na eMarketer na-ebu amụma mkpọsa e-commerce na-emefu karịrị ijeri $ 142 n'oge a, enwere ọtụtụ ihe ọma ịga gburugburu, ọbụlagodi maka obere ndị na-ere ahịa. Ihe na-eme ka asọmpi na-aga n'ihu bụ inwe ọgụgụ isi banyere nkwadebe.
O doro anya na ị ga-amaliteworị usoro a, na-eji ọnwa ole na ole gara aga ịhazi mkpọsa gị wee wuo aha na ndị na-ege ntị. Ma nye ndị ka na-eme ka igwe ha dị ọkụ, ka obi sie gị ike: oge ​​agafeela inwe mmetụta. Ndị a bụ usoro ihe anọ ga - enyere gị aka iwulite ma mepụta usoro ezumike ga - aga nke ọma.
Kwụpụ 1: Kwalite usoro iheomume gị
Ọ bụ ezie na 'ezumike' ahụ metụtara oge a na-enye ekele maka Christmas, a naghị akọwapụta oge ịzụ ahịa ezumike. Dabere na omume ịzụ ahịa 2018, Google gosipụtara nke ahụ 45% nke ndị na-azụ ahịa kọrọ na ha zụrụ onyinye ezumike site na November 13th, na ọtụtụ ndị gụchara ezumike ha ezumike site na ngwụsị November.
Site na usoro iheomume mara mma, ịbịarute n'oge na-aga oriri na nkwari agaghị apụta ịhapụ isi ụzọ. Jiri etiti Nọvemba mee ka elekwasị anya na ịchepụta na ịchekwa ihe - nke a ga - enyere gị aka ịbịaru ndị na-azụ ahịa na mbụ na atụmatụ ha na ịzụta oge.
Dịka Icheta na izu ụka Cyber ​​na-abịaru nso, bido ịmalite azụmahịa na ịgbasa mgbasa ozi gafee ọwa, na-eme ka ndị na-azụ ahịa nwee obi ụtọ. Mgbe ahụ, mụbaa ọchụchọ na ntughari ego tupu Cyber ​​Mọnde. N'ozuzu, ịbawanye mmefu ego site na atọ ruo okpukpu ise n'oge ezumike niile ga-enye gị ohere kachasị mma iji weghara mgbanwe ndị ahụ na ahịa asọmpi.
N'ikpeazụ, Q1 egosila na ọ bụ otu n'ime ọnwa kachasị ike maka azụmahịa e-commerce, na-ebu oge ezumike nke ọma n'ime Afọ Ọhụrụ. Mee ka mmefu ego gị sie ike ma ọ dịkarịa ala Jenụwarị 15th iji mee ka ọtụtụ ihe a na-eto eto na ịzụ ahịa ezumike ezumike.
Nzọụkwụ 2: Na-ebute Personhazi Nhazi ihe
Imirikiti obere ndị na-ere ahịa enweghị ike ịtụ anya itinye aka na mmefu ego nke ndị dike dị ka Amazon na Walmart. Staynọgide na-asọmpi, ahịa mara ihe - ọ bụghị isi ike - site na ịhazi onwe gị.
Ka ị na-achịkọta omenala gị na ndị na-ege gị ntị, lekwasị anya na uru ndụ gị niile. Kedu onye n’ime ndepụta gị ka gị na ya mefusịa ego, yana ndị na-ere ahịa gị ọtụtụ mgbe? Kedu ndị bụ ndị na-azụ ahịa na nso nso a? Ndị a bụ ebumnuche bụ isi maka ịmegharị na ire ere, site na ịgbanyekwu mgbasa ozi mgbasa ozi, na-atụ aro ihe ndị metụtara ya, na-enye ego na ego ma ọ bụ na-enye onyinye na ndenye ọpụpụ.
Mgbe ị na-azụlite ndị na-azụ ahịa oge niile, echefula ịgbaso ma lekwasịrị ndị ọbịa ọhụụ. Criteo na-akọ na ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ ndị a na-eweghachite na mgbasa ozi ngosi 70% karịa iji tọghata. Ordingdekọ ọrụ ndị ọbịa a na ụlọ edepụtara aha ha n'oge ezumike bụ isi ihe na-eme ka ha laghachi ma chekwaa mgbanwe.
Nzọụkwụ 3: Nka Smart n'ọkwá
Nkwalite ga-arụ ọrụ kacha mma ma ọ bụrụ na ha dabara na mkpa na mmasị nke ndị na-ege gị ntị. Nyochaa usoro ezumike gị gara aga ma mụọ ihe na-arụ ọrụ, wee tinye ego na nkwalite ndị ahụ.
Amachaghị ihe na-arụ ọrụ kacha mma? eMarketer na-akọ na onyinye ndị na-adọrọ adọrọ na-adọrọ adọrọ site na ihe karịrị 95%. Mbupu n'efu dịkwa mkpa mgbe o kwere omume, onyinye na ihe nkwụghị ụgwọ na isi ihe na-amasịkwa ndị ahịa. Dabere na ngwaahịa na mmefu ego gị, ị nwere ike ịtụle ụbọchị nnyefe e kwere nkwa, koodu coupon, onyinye onyinye ejiri akara na ozi ọdịnala.
Kwụ na Getkwụ 4: Get your Website Traffic-Ready
Ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ gị dị njikere maka njem ezumike? Obere mgbanwe ole na ole nwere ike ime nnukwu mgbanwe mgbe a na-ere ahịa ikpeazụ.
Malite site n'ịhụ na weebụsaịtị gị na-aza isi ajụjụ na obi abụọ na-apụta n'oge ahụmịhe ịzụ ahịa. Kedu ụdị mgbochi dị na mbata? Kedu otu nloghachi dị mfe? Kedu ka m ga-esi jiri ngwaahịa a? Nzọụkwụ dị mfe dịka ịkekọrịta ngwaahịa na ọnụahịa, na-egosipụta nyocha ndị ahịa yana ịkọwa ịdị mfe nke nloghachi nyere aka wulite ntụkwasị obi na ndị ahịa.
Ọzọ, mee ka weebụsaịtị gị dị mfe ịnyagharịa na mkpanaka. Nchọpụta Google gosiri na 73% nke ndị na-azụ ahịa ga-agbanwe site na saịtị mkpanaka a haziri nke ọma gaa na saịtị mkpanaka ọzọ nke ahụ na-eme ka ịzụta dị mfe. Adịla n'ihe ize ndụ na-efunahụ mgbanwe ndị a site na ileghara mkpanaka gị anya.
N'ikpeazụ, bulie akụkụ kachasị mkpa nke ụlọ ahịa e-commerce gị: ndenye ọpụpụ. Wepụta oge iji ghọta ihe na-eme ka ndị na-azụ ahịa hapụ ụgbọ ha ma mezie nsogbu ndị ahụ. Ọ bụ ụgwọ mbupu ma ọ bụ ọnụahịa ndị ọzọ a na-atụghị anya ya? Ọpụpụ gị dị mgbagwoju anya ma na-ewe oge? Ndị na-azụ ahịa ọ nwere ike ịmepụta akaụntụ? Mee ka usoro a dị mfe dịka o kwere mee iji nye onwe gị ohere kacha mma iji mechaa ire ere.
Ndị a bụ ụfọdụ ụzọ dị mkpa ị ga - esi mee mgbe ị na - akwadebe maka oge ezumike - mana agbanyeghị ka ị ga - ebido, ngagharị nke ọ bụla na njikarịcha na nhazi onwe ga - enyere aka mee mgbanwe na akara ala gị. Ọbụna nke ka mma, ọrụ ị tinyere ugbu a, site na ịtụ anya na mgbanwe saịtị na mmepe mmepe, na-akwadebe gị maka ịre ahịa dị irè site na Afọ Ọhụrụ na gafere.
Tags: izu cyberecommerceịzụ ahịa ezumikenjikarịchaWalmart
Yael bụ Director nke E-azụmahịa nke Adtaxi. O nweela ọtụtụ afọ gosipụtara ọganiihu na iwulite ọfụma ihe ntụgharị na-aga nke ọma ma bụrụ onye ndu na onye ndu na-aga n'ihu maka nkuzi, na-eduga ma na-akpali ndị otu na ndị otu.
Etu esi ebufe weebụsaịtị WordPress gi na ngalaba ohuru